Ntuli Aka Wikimedia Foundation Nke Afọ 2021 - Meta
Ntuli Aka Wikimedia Foundation Nke Afọ 2021
A na-atụ anya na ntuli aka kọmịtịị nke nlekọta n'afọ 2021 ga-eme na abalị anọ na ọnwa ọgọstụ ruo abali iri na asaa na ọnwa ọgọstụ afọ 2021. Ndị otu Wikimedia nwere ohere ịhọrọ ndị mmadụ anọ ga-anọchite anya afọ atọ. A na-ezube oku maka ndị anamacho ga-eme na abalị itoolu na ọnwa Juunu afọ 2021. ụbọchị ejighi n'aka ma o nwere ike ịgbanwe.
3 Usoro iheomụme
5 Mgbasa Ozi
5.1 Ndị Ọrụ Afọ Ofufo Na Ntuli Aka
5.2 Mkparịta ụka
2021-04-15 Mkpebi banyere ntuli aka na-abịanụ
2021-04-29 IKpọọ okụ ndi ọrụ ofụfo maka ntuli aka
2021-06-09 rụo 2021-06-29 lkpọọ okụ maka ndi anamachọ
2021-06-30 rụo 2021-07-02 Nkwupụta nke ndi anamachọ akwadoro
2021-07-07 rụo 2021-08-03 Ndi anamachọ n'eme mkpọsa
2021-08-04 Mmeghe ntuli aka
2021-08-17 Mmechi ntuli aka
2021-08-18 rụo 2021-08-24 Ọnụ ọgụgụ na nhazi votụ
2021-08-25 Nkwupụta nke nsonaazụ votụ
2021 Septemba, kọmịtịị na-ahọpụta ndị anamachọ ahọpụtara
Ndi Ntuli Aka tụgharịpụta na ntuli aka ndị gara aga bụ ihe dịka 10% n'ụwa niile.Ọ ka mma na ndị obodo nwere nkwado afọ ofufo n'ntuli aka. ụfọdụ n'ime obodo ndị ahụ ruru ihe karịrị 20% tụgharịpụtara n'votụ
Ndị Ọrụ Afọ Ofufo Na Ntuli Aka
I chọrọ inye aka welite ọnụọgụ ndị ntuli aka n'obodo gị? I kwesighi inwe ahụmịhe na ntuli aka. Ndị ọrụ afọ ofufo ga inye aka kwalite ntuli aka nke kọmịtịị na obodo ha.
Ndị ọrụ afọ ofufo sitere na ọrụ ngo Wiki niile nnọọ nụ! Ebumnuche bụ ịnwe opekata mpe otu onye orụ afọ ofufo maka Ihe omume Wiki na iri atọ kachasị elu maka ndị ntuli aka ruru eru. Nyere aka wepụta Kọmitii nke nlekota dị iche iche na ịrụ ọrụ nke ọma site na ime ka obodo gị sonye na ntuli aka ahụ!
Enwere ọtụtụ mkparịta ụka na-eme gburugburu ụwa gbasara nhọrọ ndị kọmịtịị nke nlekota. Bịa sonye na mkparịta ụka ahụ!
Telegram kọmịtịị họrọ nkata
Ndị otu na-ahụ maka ịme ntuli aka nke kọmịtịị ga-ekekọrịta ọkwa
Ndị ọrụ afọ ofufo maka ntuli aka si South Asia
Tinye njikọ ebe a ka ndị ọzọ wee sonyere mkparịta ụka ahụ
Kọmitii Ntuli Aka
Quim Gil- Nchịkọta
Jackie Koerner- Nhazi maka asụsụ bekee ya na Meta-Wiki
Oscar Costero- Nhazi maka mpaghara Latin Amerịka
Mahuton Possoupe- Nhazi maka asụsụ French
Zita Zage- Nhazi maka mpaghara sub-sahara afrịka
Denis Barthel- Nhazi maka asụsụ German na ndị mmekọ ugwu na odida anyanwu europe
Ravan Al-Taie- Nhazi maka Etiti ọwụwa anyanwụ na mpaghara ugwu Afrịka
Krishna C. Velaga- Nhazi maka mpaghara South Asia
Mohammed Bachounda- Nhazi nkwado maka asụsụ French na mpaghara MENA
Mehman Ibragimov- Nhazi Etiti na mpaghara Ọwụwa Anyanwụ Europe
Vanj Padilla- Nhazi maka mpaghara Ọwụwa Anyanwụ, South-East Asia na mpaghara Pacific
E mere nhọpụta ndị kọmịtịị nke nlekọta ntuli aka n'afọ 2020 iji họpụta oche atọ nke ndị nlekọta. N’eprel afọ 2020, ndị otu kọmịtịị ahụ kwupụtara na ana-eyigharị usoro ịtụ votụ.Ndị kọmịtịị nke nlekọta kwupụtara na Eprel afọ 2021 atụmatụ maka ntuli aka nke afọ 2021.Ndị Kọmịtịị na-achọ ịbawanye iche n'isonye na ntuli aka nke kọmịtịị.
Ndị otu kọmịtịị agbatịala oche ha rụo iri na isii iji kpuchie ọrụ na-abawanye na ngalaba nka chọrọ iji duzie Wikimedia Foundation.
ohere atọ maka obodo ọhụrụ - na Mgbakwunye-ahọrọ oche
ohere atọ maka kọmịtịị ọhụrụ-ahọrọ oche
aga ahụpụta oche anọ maka n'họrọ n'afọ 2021,oche atọ kwesiri mmeghari na nke anọ site nkwado mmeba kọmịtịị.ndi obodo ọhụrụ abụọ na agbakwụnye oche akwadoro nke aga ahoro n'oge 2022,yana oche abụọ agbakwunyere ga-abụ (anọ na mkpokọta).
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_Foundation_elections/2021/ig&oldid=21968950"